Navigator အဓိကအ Dream ဖက်ရှင် ကျန်းမာရေး Recipes အကြံပြုချက်များ လက္ခဏာများ 12>> Category: ကျွမ်းဘား ကော့အသည်းနှင့်အတူ Sandwich မ Cod အသည်း - အလှနျအသုံးဝငျမြားနှငျ့အစားအသောက်များတွင်အစားအစာ, ပင်, လက်ျာအစားအသောက်များတွင်နှင့်သူမ၏ကိန်းဂဏန်းရှာဖွေနေလူမျိုးအဘို့သည်ကြီးမြတ်တော်မူသော။ ဒါဟာပရိုတိန်းတစ်ခုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ source ကိုမှန်ကန်စေသည်သောလူ့ခန္ဓာကိုယ်အဆီနှင့်ဗီတာမင်လိုအပ်နေသည်ဟုပါရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဟင်းလျာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး, ခါတိုင်းလိုသားညှပ်ပေါင်မုဖြစ်ပါတယ်သောအရိုးရှင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သမျှသောကွောငျ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်အသည်း၏ဂုဏ်အသရေ။ သင်အသစ်များအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်, ကော့အသည်းဆီ၏သားညှပ်ပေါင်မုစာရွက်နေရာလေးကိုအတွက်ကျလိမ့်မည်ဒါရေစာ၏ banality နေသော်လည်း, က၎င်း၏ပြိုင်ဘက်ကင်းအရသာနှင့်အတူသင်အံ့သြသွားလိမ့်မယ်။ အသည်းနှင့်ကြက်သွန်နီ အတူ Sandwich
ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ: ကော့အသည်း konservirovannaya- 240 ဂရမ်;
ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ရင်သားကင်ဆာ restore လုပ်နည်း ? ကလေးကိုနို့တိုက်ကျွေးပေမယ့်စံပြပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်လှပသောရင်ဘတ်မပါဘဲမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ် - သံသယမရှိ, အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ရင်သား၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသည်။ ကလေးငယ်တစ်ဦးရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်း, သူမမကြာခဏကြောင်းသူမ၏ရင်သား၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုပြောင်းလဲနှင့်ထိုကြောင့်လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုလုပ်စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်အဘယ်ကြောင့်ရင်သား SAG အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနှင့်မည်သို့မွေးပြီးရင်ပတ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိမျ့မညျနညျး ဘယ်လိုနည်းနဲ့နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ရင်သားကင်ဆာအပြောင်းအလဲများကို?
မိသားစုဘဝသစ်ပင် မိသားစု (သို့မဟုတ်မိသားစုသစ်ပင်တပင်) ၏ အဆိုပါဆွေစဉ်မျိုးဆက် - အပင်တစ်ပင်နဲ့တူအောင်အစီအစဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအပင်၏အကိုင်းအခက်အရွက်အဖြစ်အထူးသဖြင့်မိသားစုကမျိုးနွယ်စု၏အဖွဲ့ဝင်များပုံဖော်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လူအတော်များများသင်သည်သင်၏မိသားစုကိုသစ်ပင်တပင်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြ၏။ ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ် - ငါတို့သည်ငါတို့၏အကြံပြုချက်များကိုသင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါတယ် ။
မွေးကင်းစကလေးများအတွက်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရုပ်တုဆင်းတု မွေးကင်းစမိန့်ခွန်းကုသနဲ့စိတ်ပညာရှင်မွေးကင်းစကလေးတစ်ဦးအဖြူအနက်ရောင်-and ပုံနဲ့ဓါတ်ပုံတွေအားဖြင့်ကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်အကြံပြုပါသည်အမြင်အာရုံအမြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အလို့ငှာခုနှစ်တွင်။ မိမိတို့အချောင်းတွေခြောက်လမှကလေးမွေးဖွားအနေဖြင့်ကာလများတွင် - ထိုလှာထဲမှာဆဲလ်တွေအလငျးကိုမှိန်ဖို့အထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းနှင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကိုသာကွဲပြားခြားနား, တစ်မျိုးကတော့ထက် သာ.
Feature ကို Virgo ကညာ, ဝီရိယ pedantic နှင့်ဘယ်တော့မှနောက်ကျခြင်းနှင့်အခြားသူများထံမှတူညီသောတောင်းဆိုရန်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်အားလုံးဘဝကိုဆောင်ပုဒ် Dev မှအကြီးမြတ်ဆုံး, အဲဒါကိုနေဆဲသူတယောက်မျှမရှိ, ထို့ကြောင့်အကောင့်အသစ်များ၏အားလုံးပြုကြလိမ့်မည်ကိုယ်တိုင်ကထက်ပိုကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပျက်စရာသတို့သမီးကညာသည်နှင့်လည်းစဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူထမ်း။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး Virgo လွန်းအနည်းငယ်ယောက်ျား ဝိသေသလက္ခဏာသက်သေဖြစ်။ alas ကြောင့်အပျိုစင်စာရင်းဇယားတစ်ကိုယ်ရေရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဦးဆောင်ကြသည်ခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမသည်ထုတ်လိုက်ကားမောင်းဘာကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းငှါ, clichéနာမတော်သည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုချိတ်ဆွဲအပြစ်တင်ကြဘူးမခက်ခဲသည်၎င်း၏စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီလွန်းအနည်းငယ်ယောက်ျား။ သောဖြစ်ချင်တော့ဆုံးရှုံးခဲ့ရ အဆိုပါစံပြကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းမပေးပါဘူး, ကောက်ဖို့ခုန်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု - ။ များနှင့်အပြင်, ကအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမဖြစ်
ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ Virgo အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဝိသေသ features တွေအတွက် "စီးပွားရေးလုပ်ငန်း" မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ သူမ၏အိမ်သူအိမ်သားများလွန်းတဲ့ဟိုတယ်ကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏, ထိုသို့ကွာကွာချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် - ကြောက်မက်ဖွယ်စျေးနှုန်း tags များ paste လုပ်ထားတဲ့ဘူး။ ဤသည်ကို Virgin (မိတ်ဆွေတွေရဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အသိပညာဆိုင်ရာစက်ဝိုင်းထဲကနေ) သင်၏အိမ်သို့ဧည့်သည်များဖိတ်ခေါ်ရန်ကျေနပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကလောကဝတ်၎င်း၏သဘောထားများကိုနှင့်အတူလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင်, သို့မဟုတ်, ပင်ပိုမိုဆိုးရွား, သူမ၏အဘို့, tablecloth အပေါ်တစ်ဦးအစွန်းအထင်းကိုတင်ပါလိမ့်မယ်, ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအသက်အဘို့ "တားမြစ်ပိတ်ပင် entry ကို" ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကညာပင်ကိုယ်အပေါ်မှီခိုအားဘယ်တော့မှသူတို့သာအကြောင်းပြချက်, ယုတ္တိဗေဒနှင့်ကောက်၏တည်ရှိတယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သိပ်ထင်နှင့်စိတ်ပူနေကြပါတယ်။ သမီးကညာကိုသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်မဆိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပေမယ့်အစဦး၌လူအပေါင်းတို့သည်အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးအမြတ်တွက်ချက်ရန်နိုငျကွောငျးသေချာပါသည်။ လူသား ယခုရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ Virgo ယောက်ျား၏အကျဉ်းစရိုက်လက္ခဏာတွေကတဆင့် run နိုင်ပါသည်။ ကောင်းကျိုးကိုအတူစတင်ကြပါစို့။ သတို့သမီးကညာသည်အလွန်အ, စည်းနှောင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအပေါ်အားကိုးနိုင်သည်, လူအပျိုစင်သူရပေသည်, ငါ့ကိုမယုံ, သင်က mink အင်္ကျီကိုကတိပြုထားလျှင်။ အိုးအဘယ်သို့ - ။ သင်ကစိတ်၏တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်, မမေးခဲ့ဘူး အပျိုစင်နှင့်အတူမိမိကိုယ်ါပဋိပက္ခများကို၏အကြောင်းရင်းကိုတော်ကိုအစဉ်မပြတ်သေး, စေ့စပ်, pedantry ဖြစ်လာသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကဤစံသတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်မပါဘူးဆိုရင်, သင် Virgo ၏လက္ခဏာသက်သေအောက်မှမွေးဖွားချွန်ထက်တတ်သော, နားထောင်မည်, Virgo သို့ဖြစ်.
စွပ်ပြုတ်အသီး မည်သူမျှစတိုးဆိုင်အဖျော်ယမကာမွှေးလုပ် compote နှင့်နှိုင်းယှဉ်မရနိုင်ပါ။ ယခုငါတို့ဘယ်လိုအရသာအသီး compote ချက်ပြုတ်ရန်သင့်အားပြောပြပါလိမ့်မယ်။ အသီး-berry သီး compote ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ: ပန်းသီး - 300 ဂရမ်;
ကလေးများတွင်သင့်ရဲ့အံသွားပြောင်းလဲမှု? ကလေးများတွင်နို့ရည်အံသွား၏ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ဦးချင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်6မှ 14 နှစ်အတွင်းကျရောက်ပါတယ်။ ဒီသဘာဝအလျောက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းကြောင့်မိဘ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များလိုအပ်သည်။ ကလေးတစ်ဦးသည်အမှတ်တမဲ့ကသူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အံသွားပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုအစောပိုင်းအဆင့်အတွက်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရှိလျှင်။ ကလေးများနှင့်မိဘများကိုရင်ဆိုင်ရန်ရှိစေခြင်းငှါ, နောက်ထပ်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။ သောပြဿနာများအတွက် teething ၏စင်မြင့်တွင်